एफफेक्सोर बनाम जोलोफ्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी कल्याण खेलहरु समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य समाचार कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एफफेक्सोर बनाम जोलोफ्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
ईफेक्सोर र जोलोफ्ट दुई लोकप्रिय औषधीहरू हुन् जुन डिप्रेसनको उपचारको लागि संकेत गरिन्छ, साधारण मानसिक स्वास्थ्य सर्त, अन्य सर्तहरूको माझमा। दुबै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ।
एफफेक्सोर SNRIs (serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors) भनिने औषधीहरूको समूहको एक हिस्सा हो। SNRIs मस्तिष्क मा सेरोटोनिन र norepinephrine को स्तर वृद्धि गर्दछ।
Zoloft (sertraline) एक एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता) हो। एक एसएसआरआई दिमागमा सेरोटोनिनको स्तर बढाउँदै काम गर्दछ।
एफेक्सोर वा जोलोफ्टसँगको उपचार मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सकको डाक्टरको साथ प्राय मनोचिकित्साको साथ हुन्छ। यद्यपि इफेक्सोर र जोलोफ्ट लोकप्रिय एन्टिडप्रेससन्टहरू हुन्, तिनीहरू समान छैनन्। दुबै औषधिहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
एफफेक्सोर र जोलोफ्ट बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
एफफेक्सोर एक एसएनआरआई एंटीडप्रेससन्ट हो र ब्रान्डमा उपलब्ध छ (एफफेक्सोर एक्सआरको रूपमा) र जेनेरिक फार्ममा। जेनेरिक नाम भेलाफाक्सिन हो। एफफेक्सर ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ, र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल र विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा पनि।
जोलोफ्ट एक चयनित सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) हो जुन दुबै ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। जेनेरिक नाम सेटरलाइन हो। Zoloft दुबै ट्याब्लेट र तरल रूप मा उपलब्ध छ।
एफफेक्सोर र जोलोफ्ट बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एसएनआरआई (सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन पुनअपटेक अवरोधक) एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता)
जेनेरिक नाम के हो? भेन्लाफैक्सिन सर्टलाइन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल, विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटहरू ट्याब्लेट र तरल
मानक खुराक के हो? सामान्य खुराक XR or 75 वा १ 150० मिलीग्राम दैनिक छ
कागज बिस्तारै बिस्तार जब वयस्क खुराक: 50०-२०० मिलीग्राम दैनिक (अधिकतम २०० मिलीग्राम प्रति दिन)
कागज बिस्तारै बिस्तार जब
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू वयस्कहरू; बच्चाहरू उमेर years बर्ष देखि १ years बर्ष उमेर OCD का लागि मात्र
ईफेक्सोर र जोलोफ्ट द्वारा सर्तहरूको उपचार
ईफेक्सोर, यसको तत्काल रिलीज फारममा प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डरको लागि संकेत गरीएको छ। एफफेक्सोर एक्सआर (विस्तारित रिलीज) प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर, सामान्यीकृत चिन्ता विकार, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको लागि संकेत गरिएको छ।
Zoloft प्रमुख डिप्रेशनर डिसअर्डर, जुनूनी-बाध्यकारी डिसअर्डर, पैनिक डिसअर्डर, पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, र प्रीमेनस्ट्रुअल डिसफोरिक डिसअर्डरको उपचारको लागि संकेत गरीएको छ।
amoxicillin र पेनिसिलिन बीच के फरक छ?
सर्त ईफेक्सोर Zoloft
प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD) हो (IR र XR फारामहरू) हो
सामान्यीकृत चिन्ता विकार हो (एक्सआर फारम मात्र) अफ-लेबल
आतंक विकार (पीडी) हो (एक्सआर फारम मात्र) हो
पोस्ट-ट्राउमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (PTSD) अफ-लेबल हो
सामाजिक चिन्ता विकार (SAD) हो (एक्सआर फारम मात्र) हो
मासिकपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर (पीएमडीडी) अफ-लेबल हो
ईफेक्सोर वा जोलोफ्ट अधिक प्रभावकारी छ?
एउटा अध्ययन एफेक्सोर एक्सआर र जोलोफ्टलाई डिप्रेसनको उपचारमा तुलना गर्नुभयो र पत्ता लगाए कि दुबै औषधिहरूले जीवनको गुणस्तरमा समान प्रभावकारिता र समान प्रभाव पार्दछ, तर त्यो कि जोलोफ्टको कम साइड इफेक्टहरू थिए। साथै, एफेक्सोर लिने बिरामीहरूलाई उच्च रक्तचापको खतरा बढ्यो।
मा एक विश्लेषण ल्यान्सेट सबै भन्दा राम्रो antidepressant खोज्नको लागि समीक्षा समीक्षा। अन्वेषकहरूले २१ एन्टिडेप्रेसन्टहरू (एफेक्सोर र जोलोफ्ट सहित) हेरे र सबै एन्टिडिप्रेसेन्टहरू प्लेसबो भन्दा बढी प्रभावकारी भएको पाए। एफफेक्सोर अधिक प्रभावशाली एन्टिडप्रेससन्टहरू मध्ये एक होईन, तर जोलोफ्टलाई अझ राम्रो सहन दिइयो।
तपाईंको लागि सब भन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारित गर्नुपर्छ, जसले तपाईंको मेडिकल ईतिहास, मेडिकल सर्तहरू, र अन्य औषधीहरू लिन सक्छ जुन एफेक्सोर वा जोलोफ्टसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्छ।
कभरेज र एफफेक्सर बनाम जोलोफ्टको लागत तुलना
एफफेक्सोर एक्सआर, एफफेक्सोरको अधिक लोकप्रिय प्रकार हो, प्राय जसो बीमा र मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको छ। जेनेरिक संस्करणको तल्लो कोपेई हुनेछ, र ब्रान्डको नाम उच्च कोपे हुन सक्छ वा कभर नहुन सक्छ। ,०, १ 150० मिलीग्राम जेनेरिक क्याप्सूलको साधारण प्रिस्क्रिप्सको आउट-अफ-पकेट मूल्य $ १ .० हो। तपाईं एक नि: शुल्क सिंगलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ साधारण cription १ for को लागि जेनेरिक प्रिस्क्रिप्सन किन्नको लागि।
Zoloft सामान्यतया दुबै बीमा र मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको हुन्छ। जेनेरिक Zoloft एक कम कपे हुनेछ, जबकि ब्रान्ड नाम एक उच्च कोपे हुन सक्छ वा सबै कभर नहुन सक्छ। Zoloft को आउट-अफ-पकेट लागत १०० मिलीग्राम जेनेरिक सेटरलाइन ट्याब्लेटको tablets० ट्याब्लेटहरूको लागि करीव $ 32 हो। तपाईं जेनेरिक Zoloft को लागी १० डलरको मूल्य कम गर्न एक एकल सिंगलकेयर कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
जब बीमा योजनाहरू भिन्न हुन्छन् र परिवर्तनको अधीनमा हुन्छ, हालको कभरेज जानकारीका लागि तपाईंको स्वास्थ्य बीमा योजनालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मात्रा ,०, १ 150० मिलीग्राम विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलहरू ,०, १०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ २० $ ०- $ १
एकलकेयर लागत $ १०- $ .० $ 9- $ 31
एफफेक्सर बनाम जोलोफ्टको साझा साइड इफेक्टहरू
एफफेक्सोर एक्सआरको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू मतली, निन्द्रा, सुख्खा मुख, पसिना, यौन समस्या, भोक कम, र कब्ज हुन्।
सब भन्दा साधारण प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू Zoloft को मतली, पखाला, यौन समस्या, सुख्खा मुख, अनिद्रा, र निद्रा हो।
अन्य प्रतिकूल प्रभावहरू हुन सक्छन्। साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श लिनुहोस्।
ईफेक्सोर * Zoloft
टाउको दुखाई हो १.%% हो % रिपोर्ट गरिएको छैन
मतली हो %०% हो २%%
पखाला हो %% हो बीस%
भोक कम भयो हो १०% हो %%
स्खलन विकार / यौन समस्याहरू हो -10-१०% हो %%
सुख्खा मुख हो पन्ध्र% हो १%%
निन्द्रा हो पन्ध्र% हो एघार%
अनिद्रा हो १%% हो बीस%
* सूचीबद्ध प्रतिशतहरू एफफेक्सोर एक्सआरको लागि हो, एफफेक्सोरको अधिक सामान्य रूपमा निर्धारित फर्म्युलेसन।
स्रोत: डेलीमेड ( ईफेक्सोर एक्सआर ), डेलीमेड (जोलोफ्ट)
एफिएक्सोर बनाम जोलोफ्टको ड्रग अन्तरक्रिया
एमएओ अवरोधकर्ताहरू एफेक्सोर वा जोलोफ्टको १ 14 दिन भित्र प्रयोग गर्न मिल्दैन। संयोजनले जोखिम बढाउन सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , अधिक सेरोटोनिनको कारणले जीवनलाई जोखिममा पार्ने चिकित्सा आपतकालिन। ट्राइप्टनहरूले माइग्रेनको साथसाथै अन्य एन्टिडिप्रेसन्ट्स, ओपियोइड्स, डेक्स्ट्रोमर्थोर्फन, वा सेन्ट जोन्स वर्टलाई सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिमको कारण एफफेक्सोर वा जोलोफ्टको साथ प्रयोग गर्न मिल्दैन।
Nonsteroidal विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs) जस्तै Adil, मोट्रिन, र एस्पिरिन, वा warfarin जस्ता anticoagulants, एफिएक्सोर वा Zoloft साथ लिनु हुँदैन किनभने वृद्धि रक्तस्राव जोखिम को कारण।
एफेक्सोर वा जोलोफ्ट लिनुहुँदा रक्सी पिउनुहुन्न।
औषधि ड्रग क्लास ईफेक्सोर जोलोफ्ट
नेप्रोक्सेन NSAIDs (नन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) हो हो
Tranylcypromine MAOIs (Monoamine oxidase inhibitors) हो हो
Dextromethorphan खोकी दमन हो हो
Nortriptyline TCA (tricyclic antidepressants) हो हो
डिफेनहाइड्रामिन Sedating antihistamine हो हो
एफेक्सोर र जोलोफ्टको चेतावनी
ईफेक्सोर र जोलोफ्टसँग एक छ कालो बक्स चेतावनी । कालो बक्स चेतावनी सबैभन्दा कठोर चेतावनी हो जुन एफडीए (संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन) द्वारा आवश्यक छ। बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, र युवा वयस्कहरू (२ years बर्ष उमेरको उमेर सम्म) जसले एन्टिप्रेसप्रेसन्ट औषधिहरू लिन्छन् आत्महत्या गर्ने विचार र व्यवहारको जोखिम बढ्छ। एन्टीडिप्रेसन्ट्स लिने सबै बिरामीहरूलाई होशियारी अनुगमन गरिनु पर्छ।
एफेक्सोर वा जोलोफ्ट लिने बिरामीहरू सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिममा छन्, ज्यान जोखिममा पार्ने चिकित्सा आपतकालिन धेरै सेरोटोनिनको कारणले हुन्छ। यो अधिक बढि खुराक बढ्ने र / वा यदि सेरोटोनिन बढाउने अन्य औषधीहरू लिनेको साथ बढी सम्भावना हुन्छ। मतिभ्रमण, ज्वरो, कम्पन, दौरा, र / वा आन्दोलनको लक्षणहरूको लागि मोनिटर गर्नुहोस्।
वापसी लक्षणहरू, जस्तै आन्दोलन, जब एफफेक्सोर वा जोलोफ्ट बन्द गर्दछ। बिरामीहरूले औषधीको बिस्तार बिस्तार बिग्रनु पर्छ र अचानक कहिल्यै रोकिनु हुँदैन। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई टेपरिंग तालिका दिन सक्दछ।
दौरा वा द्विध्रुवीय गडबड भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
अनुपयुक्त एन्टिडीयुरेटिक हार्मोन स्राव (SIADH) को सिंड्रोमको कारणले हाइपोनाट्रेमिया (कम सोडियम) को खतरा छ। एसआईएडीएच लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाई, मेमोरी कमजोरी, भ्रम, कमजोरी, र अस्थिरता समावेश हुन सक्छ, जुन झर्ने कारण हुन सक्छ। लक्षण देखा परेमा तत्काल उपचार खोज्नुहोस्।
एंगल-क्लोजर ग्लूकोमा भएका बिरामीहरूमा एफिएक्सोर वा जोलोफ्ट बेवास्ता गर्नुहोस्।
ईफेक्सोर वा जोलोफ्टले रक्तस्रावको खतरा बढाउन सक्छ। यो जोखिम एनएसएआईडी वा वारफेरिनको साथ प्रयोगको साथ बढ्छ।
भोक कम गर्नु र / वा वजन घटाउन सक्छ।
ईफेक्सोर वा जोलोफ्ट मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ गर्भावस्था यदि तपाईंको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकले जोखिमहरूलाई पछाडि पार गर्छ भने। ईफेक्सोर वा जोलोफ्टले बच्चालाई गम्भीर जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी यदि तेस्रो त्रैमासिकमा। यदि तपाईं पहिले नै एफफेक्सोर वा जोलोफ्टमा हुनुहुन्छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Zoloft मौखिक समाधानमा १२% रक्सी हुन्छ।
ईफेक्सोरले रक्तचाप बढाउन सक्छ। एफफेक्सोरको साथ र पनी उपचारको बखत रक्तचाप मोनिटर गर्नुहोस्। उच्च रक्तचाप वा मुटुको समस्या भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
एफफेक्सर बनाम जोलोफ्टको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
एफफेक्सोर एक एसएनआरआई एंटीडप्रेससन्ट हो। वयस्कहरूमा एफिएक्सोरले डिप्रेसन व्यवहार गर्दछ (जसलाई प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर वा प्रमुख डिप्रेशन पनि भनिन्छ)। एफिएक्सोर एक्सआर (विस्तारित-रिलीज) डिप्रेसन, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, पैनिक डिसअर्डर, र सामान्यीकृत चिन्ता विकारको उपचार गर्दछ। एफफेक्सोरको जेनेरिक नाम भेलाफैक्सिन हो।
जोलोफ्ट (सेराटलाइन) एक एसएसआरआई हो (सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिउपटेक अवरोधक) प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर, जुनूनी-बाध्यकारी डिसअर्डर, पैनिक डिसअर्डर, पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, र प्रीमेनस्ट्रुअल डिसफोरिक डिसअर्डर।
ईफेक्सोर र जोलोफ्ट एकै हो?
ईफेक्सोर र जोलोफ्ट एकै होइनन्। ईफेक्सोर ड्रग क्लासको एक हिस्सा हो जुन एसएनआरआईहरू भनिन्छ, वा सेरोटोनिन-नोरेपिनफ्रिन रिअपटेक इन्हिबिटरहरू। SNRIs सेरोटोनिन र norepinephrine मा काम गर्दछ। एसएनआरआई वर्गका केहि अन्य लागूपदार्थहरू हुन् सिम्बाल्टा (ड्युलोक्सेटिन) र प्रिस्टिक (डेसेन्लाफाक्सिन)।
जोलोफ्ट एक औषधि वर्गको हिस्सा हो जसलाई एसएसआरआईहरू भनिन्छ, वा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिउपटेक अवरोधकर्ताहरू। एसएसआरआईहरू सेरोटोनिनमा काम गर्दछन्। औषधीहरूको एसएसआरआई कक्षामा केहि अन्य औषधिहरू प्रोजाक हुन् ( फ्लुओक्सेटीन ), सेलेक्सा (citalopram), Lexapro ( एसिटालोप्राम ), Luvox (फ्लोभोक्सामिन), र Paxil (paroxetine)।
एफेक्सोर र जोलोफ्ट बीचका अन्य भिन्नताहरू माथि उल्लेखित छन्।
ईफेक्सोर वा जोलोफ्ट राम्रो छ?
कि त औषधि प्रभावकारी हुन सक्छ, तर सबैले बिभिन्न औषधिहरूमा फरक फरक प्रतिक्रिया दिन्छन्। उत्तम औषधि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ, जसले तपाईको मेडिकल ईतिहास र अन्य औषधिहरू जुन एफिएक्सोर वा जोलोफ्टसँग अन्तर्क्रिया लिन सक्छ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ।
के म ईफेक्सोर वा जोलोफ्ट गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्न सक्छु?
एफेक्सोर वा जोलोफ्टलाई तेस्रो त्रैमासिकमा लिदा बच्चामा गम्भीर जटिलताहरू हुन सक्छ, परिणामस्वरूप लामो अस्पतालमा भर्ना, ट्यूबलाई खुवाउने, र सास फेर्न मद्दत गर्ने। एफफेक्सोर वा जोलोफ्ट केवल गर्भावस्थामा तोकिएको हुन्छ जब लाभहरू जोखिमभन्दा बढी हुन्छन् र यदि कुनै अन्य सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हुँदैन भने। यदि तपाईं पहिले नै एफफेक्सोर वा जोलोफ्ट लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
म रक्सीको साथ एफिएक्सोर वा जोलोफ्ट प्रयोग गर्न सक्छु?
कुनै पनि औषधि रक्सीको साथ प्रयोग गर्नु हुँदैन। एफेक्सोर वा जोलोफ्ट जस्तो एन्टिप्रेसप्रेसन्टको संयोजनले, रक्सीको साथ, डिप्रेसन वा चिन्ताका लक्षणहरू बिगार्न सक्छ, सोच र सतर्कता कमजोर बनाउँछ र बेहोरापन र तन्द्राको प्रभाव बढाउन सक्छ।
के जोलोफ्ट चिन्ता वा उदासीनताको लागि राम्रो छ?
Zoloft प्रमुख अवसादग्रस्त डिसऑर्डर (डिप्रेसन) को लागी संकेत गरीएको छ। Zoloft सामान्य चिन्ता विकार को लागी संकेत गरीएको छैन, तर यो आतंक विकार, सामाजिक चिन्ता डिसअर्डर, र OCD को लागी संकेत गरीएको छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईको लागी उत्तम औषधि निर्धारण गर्न सक्दछ, तपाईको निदानमा र अन्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ जस्तै तपाईको मेडिकल ईतिहास र अन्य औषधि जुन तपाई लिनुहुन्छ Zoloft सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ।
के Zoloft चिन्ता बढ्न सक्छ?
जोलोफ्टले डिप्रेसन र केही प्रकारको चिन्ता विकारहरूको उपचार गर्न सक्दछ। यद्यपि केही व्यक्तिले अनुभव गर्छन् चिन्ता वा आन्दोलन बढ्यो , विशेष गरी जब उपचार सुरू गर्ने। यदि तपाइँ जोलोफ्ट लिनुहुन्छ र चिन्तित वा चिन्तित हुनुहुन्छ भने, चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
साथै, आत्महत्या विचार केहि केसहरूमा हुन सक्छ, र जोखिम २ patients बर्ष उमेरका बिरामीहरूमा बढी हुन्छ। यदि तपाईं आत्महत्या विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, आपतकालीन उपचार खोज्नुहोस्। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईका प्रियजनहरूलाई आत्मघाती विचार र / वा व्यवहारको सम्भावनाको बारे थाहा छ, त्यसैले तिनीहरू कुनै पनि सम्भावित मुद्दाहरूको लागि सतर्क हुन र आवश्यक भएमा उपचार लिन मद्दत गर्न सक्छन्।
बिहान वा रातमा जोलोफ्ट लिनु राम्रो हो?
Zoloft को लागी निर्धारित जानकारीले लिनको लागि यो भन्दा राम्रो समय निर्दिष्ट गर्दैन। दिनको उत्तम समय भनेको तपाई यसलाई हरेक दिन लिनको लागि सम्झनुहुनेछ। साथै, यदि Zoloft ले तपाईंलाई निन्द्रा बनाउँछ भने, तपाईं रातमा लिन सक्नुहुन्छ। केही व्यक्तिको लागि, Zoloft कारण अनिद्रा हुन्छ। यदि Zoloft कारण अनिद्रा हुन्छ, तपाईं यसलाई बिहान लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो प्रिस्क्रिबरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि ऊ वा उनीले सिफारिस गरिएको समय सुझाव दिन्छ।
ईफेक्सोर बनाम लेक्साप्रो
ईफेक्सोर बनाम वेलबुटरिन
प्रिस्टिक बनाम एफफेक्सोर
Antidepressants स्विच गर्दै
नुभाआरing: तपाईलाई जन्म नियन्त्रण रिंगको बारे जान्नुपर्ने सबै कुरा
यो दैनिक zyrtec लिन सुरक्षित छ
तपाइँ काउन्टर मा mucinex डी किन्न सक्नुहुन्छ